Fikradaha naqshadaynta 24 Chest Tattoos Ragga iyo haweenka - Fikradaha farshaxanka ee Tattoos
Fikradda naqshada ee 24 Chest Tattoos ee loogu talagalay ragga iyo dumarka
Haddii aad tahay qoob-ka-ciyaarka iyo takooreyaasha, waxaa jira kumaan kun oo naqshadood oo laga yaabo in aad rabto inaad la xiriirto.
Isticmaalka dhar-xayiraa #chest waxay noqdeen wax aan ku aragno qaar ka mid ah dadka adduunka ah sababtoo ah saameynta geesinimada leh ee cajiibka ah ee uu leeyahay jirka. il image
Kuwani #Tattoos waxay noqon kartaa qurux, cabsi galin, cajiib ah, daal iyo xitaa cabsi. Dhammaan waxay kuxirantahay waxa aad rabto inaad gaarto ka dib sawir qaadashadaada. il image
Sawirada feeraha ayaa ku jira maadada. # Qorshayaasha waxay noqon kartaa mid ka mid ah dhibcaha taatuuga ah ee ugu fiican ee aad ka heli karto meel kasta oo adduunka ah. il image
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ogaatid meesha xabadka la dhigo marka ay timaado sawiridda tattoo. Ragga waxay sheegi karaan in feedhadu ay ka soo jeedaan qaybta qoorta u dhow, waxaan ka hadleynaa jilbaha hoose ee murqaha murqaha. Tani waa waxa ay raggu ku tilmaami karaan laabtooda. il image
Dumarku waxay sheegi karaan in nuugyada naasuhu aanay ku jirin laabta. Tani macnaheedu maaha inaadan awoodin inaad xoqdo meelahaas. il image
Marka ay timaado naqshadaha farshaxanka maqaarka, ma jiraan wax aan la socon. Waa inaad ogaataa in mid ka mid ah fikradaha khaldan ee dhacaya marka aad ka hadashid tattooska xabadka uu yahay in sawirku uusan xanuun lahayn. il image
Sababta ay uga fekerayaan xariiqdan waa sababta oo ah waxay si khalad ah u rumaysan yihiin in gobolada lafdhabarta ee ragga iyo naasaha haweenka ku jira ay yihiin halka ay ku jiraan maanka. il image
Waxaanu kugula hadli doonaa in lafaha qosolka ah ee la yiraahdo in uu yahay qayb ka mid ah laabta. Ka hor intaadan dooran naqshadda laabtaada, iskuday oo hubi in aad dooranayso naqshad sameynta udub dhexaad ah oo ka soo baxaysa xuddunta laga helay xabadka iyo curqooyinka dabiiciga ah. il image
Ha ku fikirin sawirada internetka. Waxaa la yaab leh, sawirrada xabadka ee lagu soo bandhigay internetka ayaa aad uga duwanaan doona jirkaaga. il image
Sawirada xabadka ayaa horey u jirey 20th qarnigii. Markaad isticmaaleysid shaatiinka xabadka, hubso in aad haysatid naqshad dhamaystiran oo kuu sheegi doonta sheekadaada. il image
Dadka intooda badani waxay ku dhaartaan jimicsiga xabadka, waxay yiraahdaan waxay qabaan naqshad noocaas ah ama micnaha taatuuga qalbigooda. Waxaan had iyo jeer kuu sheegi doonaa waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid ka hor intaanad tagin sawirka tattoo waa in aad sameysid cilmi-baaris. il image
Sawirada feerka ayaa noqotey waxa ku jira munaasabada oo dhan meelo ay tahay sababta aan u aragno in ay soo jiidatay siyaabo kala duwan oo naqshaduhu waxay arki karaan oo keliya markaad haysato farshaxan wanaagsan oo tattoo ah. Fiiri nooca tattoo feerka oo noo sheeg in ay tahay mid qurux badan. il image
Calaamadeynta tattoo feerka ayaa lagu qori karaa qeyb kasta oo ka mid ah jirka. Mararka qaarkood, waxaan ku aragnaa tattoos xabadka oo aan caadi ahayn. Waad ku mahadsantihiin kala duwanaanta kala duwan ee hal-abuurka ee tattooists aduunka oo dhan. Ma arki kartid tattoo feeraha oo aanad fiirin labaad. il image
Waa muhiim in aad fahamto in qaabka shimbirta shimbirta ay noqotey mid muhiim ah. Waa inaad naga qaadataa wakhti aan ku raadinno buugta internetka ee shimbiraha ka hor inta aanad dooran doorashadaada. Marka ugu horeysa ee aad sameyso waa inaad hesho tattooist oo kuu sheegi doona waxa ku jira munaasabadda. il image
Waxaa jira noocyo kala duwan oo shimbiro ah; shimbiraha gurguurta iyo kuwa duurjoogta ah ee dhammaan noocyada iyo cabbirka. Shimbir kasta waxay leedahay muhiimadeeda taasoo ah sababta aan uga taxaddareyno nooca shimbirta shimbirta ah ee aan isticmaaleyno. Tusaale ahaan, qaata ama caanku waxay la xidhiidhaan sixirka madow iyo sixirka, halka qoollaanka caddaanka ah loo yaqaanno calaamad u ah nabadda iyo nadiifnimada. il image
Habka sahlan ee looga jawaabayo su'aashan waa in lagu hubiyo tattoo aad raadineyso. Tattoo feerka wuxuu matalaa meelo badan oo ka mid ah royalty. Maanta, isbedelka tattoos xabadka ayaa sii kordhaya, waxaana sidoo kale jira sababo kale oo aad ugu baahan tahay inaad naftaada u hesho. il image
Waxaa muhiim ah in aad fahamsan tahay in naqshadeynta feerka laabta ay noqotey mid muhiim ah. Waa inaad wakhti ku qaadataa inaad raadiso adigoo isticmaalaya liiska buugta internetka ee wareegyada ka hor inta aanad dooran doorashadaada. il image
Bal qiyaas, tattoo feerka ah uma muuqato mid adag in la soo saaro. Iyada oo shaqo fiican oo guriga ah laga helo meesha aad ku heli lahayd, waxaad hubaal ka dhigan kartaa sidan oo kale. il image
Tattoo feerka ee ragga ayaa si dhakhso ah u socon. Neefta qofka ayaa la qaadi karaa si loogu dhejiyo qofka iyo sababtoo ah waa mid ballaaran oo ballaadhan, sawir badan ayaa halkan lagu sameyn karaa. il image
Ma jeceshahay tan? Marka ugu horeysa ee aad sameyso waa inaad hesho tattooist oo kuu sheegi doona waxa ku jira munaasabadda. il image
Markaad tattoo sidan oo kale sidan sameysid, u qaado waqti aadna waydiiso su'aalo oo aad ogaatid meesha aad rabto sidan oo kale. il image
Halkan riix halkan si aad uhesho naqshad farsamo ah
tattoos qoortatattoos saaxiib saxa aharrow Tattootattoossawirada gabdhahaJoomatari Tattoostattoos gacantatattoos sleevetattoos qorraxdatattoos eagletattoo indhahaDhaqdhaqaaqawaxay jecel yihiin tattoostattoo tilmaanlammaanahatattoo maroodigaTattoo Feathershaatiinka shiidannaqshadeynta mehnditattoos qabaa'ilkatattoos taajkiisawir gacmeedtaraagada kubbaddaTartoo ubax badanmuusikada muusikadalaabto laabtagaraacista gacmahatattoo biyo ahlibto libaaxTattoo infinityTilmaamta jaalaha ahtattoo dheemansawirada malaa'igtaku dhaji tattooshenna tattootattoo ah octopussawirrada raggashimbir shimbirwaxaa la dhajiyay tattoosTattoos Wadnahakoi kalluunkacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahtattoos moontattoos ubaxtattoos iskutallaabtagadaal u laabofikradaha tattootattoos cagtatattoos qosol lehjimicsiga bisadaha